China Graphite ntekwasa faiba glaasi Fabric rụpụta na Factory | Jiashun
Ejiri maka akara na nchebe dị elu dị elu.
Dị ka ụzọ isi jiri akụ na-amụbawanye na azụmaahịa mba ụwa, anyị na-anabata atụmanya sitere na ebe niile na web na offline. N'agbanyeghị na elu àgwà ihe anyị na-enye, irè na-eju afọ alo ọrụ na-ọnọ site anyị ruru eru mgbe-ire ọrụ otu. Edepụtara ndepụta na nkọwapụta zuru ezu na ozi weil ọzọ ọ bụla ga - ezitere gị n’oge n’oge maka ajụjụ a. Biko biko kpọtụrụ anyị site na iziga anyị ozi ịntanetị ma ọ bụ kpọọ anyị mgbe ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara nzukọ anyị. u nwekwara ike inweta ozi adreesị anyị na saịtị anyị ma bịa na ọrụ anyị. Anyị na-enweta nyocha nyocha nke ngwaahịa anyị. Obi siri anyị ike na anyị ga-ekerịta mmezu ma mepụta mmekọrịta mmekọrịta siri ike na ndị anyị na ha ga-arụ n’ime ahịa a. Anyị na-achọ ịga n'ihu maka ajụjụ gị.
Ha na-adigide ịme ngosi uwe na-akwalite ihe n'ụzọ dị irè n'ụwa nile. Ọnweghị n'okpuru ọnọdụ kpamkpam isi ọrụ na a ngwa ngwa oge, ọ bụ a kwesịrị gị nke magburu onwe ya mma. Site na ụkpụrụ nke "Prudence, Efficiency, Union and Innovation. Companylọ ọrụ ahụ na-agbasi mbọ ike iji gbasaa azụmahịa mba ụwa, bulie ụlọ ọrụ ya uru ma bulie usoro mbupụ ya. Anyị nwere obi ike na anyị ga-enweta atụmanya dị egwu na ka ekesa ya n'uwa nile n'ime afo ndi na abia.
Nke gara aga: vermiculite ntekwasa faiba glaasi akwa
Osote: faiba glaasi ịgbado ọkụ blanket